Iindaba -I-CHANGYU-HW WOOD – Umenzi weplywood oqeqeshiweyo ovela e-China
I-CHANGYU-HW WOOD yinkampani ekhethekileyo ekuyileni, ekuveliseni nasekuphuhliseni iintlobo ezahlukeneyo zeplywood, ifilimu ejongene nefilimu, i-LVL kunye nayo nayiphi na iplanga. Isetyenziswa ngokubanzi kwiipaneli zangaphakathi zezithuthi, ukwenza ifanitshala, izinto zokwakha, ipallet, kunye namanye amashishini afanelekileyo.
Kuxhomekeke kuncedo lwesiseko seplywood kwaye ngokuhambelana neemeko zasekhaya, imveliso inokusetyenziswa kwakhona amaxesha amaninzi. Ngenxa yoko, iimveliso zethu zithengiswa kakuhle e-Itali, eJamani, eFrance, e-Australia, eCanada, eMelika, eJapan, e-Bhritane, eMbindi Mpuma njl. I-CHANGYU-HW WOOD ibizinikela ekuveliseni nasekuthengiseni iimveliso ezahlukeneyo zeplywood kunye neenkuni ukusukela ngo-2002. Umthamo ophakathi wokuthumela ngaphandle uphakathi kwe-3 kunye ne-5 lamawaka eemitha zetyhubhu ngenyanga ngoku. Ngokwanda kwentengiselwano yeshishini lethu kunye nokwandiswa kwemarike yehlabathi, i-CHANGYU-HW WOOD isetyenziselwe ukuhlangabezana neemfuno zophuhliso lwenkampani yethu kunye nokuphucula ukubanako kwethu kwinkonzo yabathengi nakwinkqubo yeshishini.
Ukukhula ngokukhawuleza koqoqosho lwase China kuye kwaba kukutsala okunamandla ukukhuthaza ibango lentengiso yeplywood.
Imithi evela kumahlathi akhula ngokukhawuleza kunye nesivuno esikhulu eMantla e-China, eMpuma China kunye neendawo eziphakathi nezisezantsi zoMlambo i-Yangtze zikhukuthele kakhulu kwintengiso, kunye nokuqhubeka ngokuqhubekayo kokuphakama kwemithi ye-broadleaf ephezulu evela phesheya, ngokubonelela ngentabalala izinto ekrwada ngenxa yophuhliso oluqhubekayo kushishino ngamaplanga eTshayina. I-Shandong kunye ne-Jiangsu esemantla, njenge-Xuzhou, ziye zaba ziindawo eziphambili zemveliso ngeplywood.
Imithombo yabasebenzi eyoneleyo ikwayinto ebalulekileyo kwiindleko zeshishini leplywood lase China xa kuthelekiswa namanye amazwe avelisa iiplanga.
Umgangatho weemveliso zeplywood zaseTshayina nazo ziphuculwe kakhulu, zisenza ukuba sikhuphisane ngakumbi kurhwebo lwamanye amazwe.
I-China ayisiyiyo nje i-plywood enkulu yokuthumela ngaphandle, kodwa ikwangumvelisi weplywood omkhulu emhlabeni.